Apple Mepu inogona kuverengerwa mumapeji ewebhu nekutenda kune «MapKit JS» chishandiso | Ndinobva mac
Paive nebasa idzva iro rakapfuudzwa kwatiri mukati memazuva ekupedzisira WWDC 2018. Uye nderimwe rinoreva Apple Mepu uye mukana wekuzvipinza mumapeji ewebhu pamwe nemamwe masevhisi. Apple yanga ichishandira Vagadziri vewebhu vanogona kushandisa mepu yavo nekuda kwechishandiso chitsva.
Kana iwe watarisa pamapeji ekubatana emawebhusaiti akasiyana siyana aunoshanyira, kana iwe uine yakamisikidzwa mepu sevhisi kuratidza iyo chaiyo nzvimbo, Google Mepu inowanzo shandiswa. Kune mamwe masevhisi, asi izvi zvinogoneka nevashoma kwazvo. Apple yanga ichishanda nesimba kwechinguva kuti mamepu ayo amukire pachiitiko ichi. Uye mune ino pfungwa ivo vawana sarudzo inoshanda yekupa zvimwe zvinobuda kumepu yavo sevhisi. Anonzi MepuKit JS.
Apple Mepu inoshandiswa muCarPlay, pane edu Apple zvishandiso (Mac, iPhone, iPad), asi inogona kuvhurwa kumapeji ewebhu nekuda kwechishandiso chitsva chekuvandudza chakatangwa naApple mazuva mashoma apfuura uye icho Inonzi «MapKit JS». Nayo, vagadziri vanogona kubudirira pinda a widget papeji rake rewebhu uye kuti vashandisi vanoshanya vanogona kudyidzana nayo, kungave nekuisa mukati kana kuburitsa kunze mepu, pamwe nekugona kubvunza kana kutsvaga.
Chekupedzisira, uye zvinoenderana neApple makomendi kubva kune iro peji rezvishandiso, MepuKit JS inobvumidza 25.000 mepu kurodha pazuva uye mazana maviri nemakumi mashanu emabasa ekufona pazuva. Google, semuenzaniso, inopa yayo yemahara mwero wemakumi maviri nemazana mashanu emitero pazuva uye zviuru zana zvekufona kubasa sevhisi pamwedzi
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple Mepu inogona kuverengerwa mumapeji ewebhu nekuda kweiyo «MapKit JS» chishandiso
Yekuongorora Safari Technology Preview 58 browser inoenderana ne macOS Mojave